New Delhi - Gpedia, Your Encyclopedia
w:it:New Delhi Wa magaalo-madaxda Hindiya oo ukalaqeybsan delhicusub iyo duug w:it:New Delhi New Delhi (liiskan liiska codadka))   waa degmada magaalada Delhi oo u adeegta caasimadda Hindiya iyo saddexda dal ee Hindiya. Dhagaxa aasaasiga ah ee magaalada waxaa dhigtay George V, Emperor of India intii lagu jiray Dushar ee 1911.  Waxaa loo qaabeeyey nashqadeeyadii Ingiriiska, Sir Edwin Lutyens iyo Sir Herbert Baker. Caasimadda cusub ayaa la furay 13 February 1931,  Viceroy iyo gudoomiyaha Indian Lord Irwin. Inkasta oo dariiqada Delhi iyo New Delhi loo isticmaalo si is-beddel ah loo isticmaalo si loo tixraaco National Capital Territory of Delhi (NCT), kuwani waa laba qaybood oo kala duwan, iyadoo New Delhi ay sameysey qayb yar oo ka mid ah Delhi. Gobolka caasimadda ayaa ah mid aad u weyn oo ka kooban NCT oo dhan oo ay weheliyaan degmooyinka is qabqabta ee dalalka deriska ah. New Delhi ayaa loo soo xulay mid ka mid ah boqollaal reer Hindiya ah oo hoos imaanaya Raysal Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ee Cimilada Aqoonta Smart.
Calcutta (hadda Kolkata) waxa uu ahaa caasimadda Hindiya inta lagu guda jiray Rajada Koobaad ee Ingiriiska ilaa December 1911. Calcutta waxa uu noqday xarun dhaqdhaqaaqa qaranimada tan iyo dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad oo uu keenay qaybta Bengal kadibna Viceroy ee British India Lord Curzon. Tani waxay abuurtay kobcin ballaaran oo siyaasadeed iyo mid diimeed oo ay ka mid yihiin dilal siyaasadeed oo ka socda saraakiisha Ingiriiska ee Calcutta. Dumarka ka soo horjeeda colonial ee ka mid ah dadweynaha u horseedaya in ay dhameeyaan qulqulka alaabada Britishka ayaa ku khasbey xukuumadda gumeysiga in ay dib ula midoobaan qaybta Bengal iyo gabi ahaanba caasimadda New Delhi.  Old Delhi waxay u adeegtay xarun siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhawr dal oo kala ah Hindiya iyo Sultanate Sultanate, ugu badnaantii Boqortooyada Mughal ee laga soo bilaabo 1649 ilaa 1857. Intii lagu jiray bilowgii 1900, waxaa la soo jeediyey in loo gudbiyo maamulka Ingiriiska si ay u wareegaan caasimadda Boqortooyada Ingiriiska ee Hindiya, sida Hindiya loo magacaabay, oo ka timid Calcutta oo ku taal xeebta bari, Delhi.  Dawlada Hindiya Hindiya waxay dareensan tahay in ay si fudud u sahlanaan lahayd in ay u maamulaan Hindiya Delhi oo ku taal bartamaha waqooyiga Hindiya. Dhulkii dhismaha magaalada cusub ee Delhi waxaa lagu qabtay Sharci Dejinta Dhulka 1894. 
Faahfaahin Cimilada New Delhi (Safdarjung) 1981–2010
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Delhi&oldid=181426"